“အလုပ်ရှင်ကိုပြောပြလိုက်ကြဟေ့” လုပ်သားအထောက်အထား သိမ်းယူခြင်းသည် ထောင်ဒဏ်နှင့်ငွေဒဏ်ဘတ် ၁ သောင်းကြခံနိုင်!! – Myanmar Live
“အလုပ်ရှင်ကိုပြောပြလိုက်ကြဟေ့” လုပ်သားအထောက်အထား သိမ်းယူခြင်းသည် ထောင်ဒဏ်နှင့်ငွေဒဏ်ဘတ် ၁ သောင်းကြခံနိုင်!!
November 1, 2019 November 1, 2019 - by arnakorn saengsiritrakun
ကျွန်ုပ်တို့တတွေရဲ့အကျိုးခံစားခွင့်နဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေကို ဘယ်သူဘယ်ဝါက ချိုးဖောက်တာကိုမခံပါနဲ့။ ဘယ်လိုအကြောင်းမျိုးကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်သားတွေရဲ့အထောက်အထားတွေကို အလုပ်ရှင်သိမ်းယူတာဟာ ဘီအီး ၂၅၆၀ ခုနှစ်၊နိုင်ငံခြားသားအလုပ်အကိုင်စီမံခန့်ခွဲခြင်းဆိုင်ရာတော်ဝင်ထုတ်ပြန်ချက်အရ တရားမ၀င်ဘူးဆိုတာ လုပ်သားအားလုံးမှတ်ထားကြပါ။ အလုပ်ရှင်ကို ကြွေးမြီတင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့သိမ်းယူပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ ဒီလိုသိမ်းယူတာဟာ လုပ်သားတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကို ချိုးဖောက်ရာရောက်သလို လုပ်သားတွေဟာ အဓမ္မလုပ်သားနဲ့ ကြွေးမြီဖြင့်ချည်နှောင်ခံရသည့်လုပ်သား အဖြစ်ရောက်ကိုရောက်ရှိသွားနိုင်သလို လူကုန်ကူးခံရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ထဲ ကျရောက်နိုင်ပါတယ်။
သာဓကအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် အလုပ်ရှင်ပြောင်းခစိုက်ထုတ်ပေးထားရာကနေ မိမိအပေါ်ကြွေးမြီ ၁၁၅၀၀ ဘတ်တင်နေတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ မြန်မာလုပ်သားရဲ့အထောက်အထားကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေလကတည်းက သိမ်းယူထားတဲ့ မစ္စနွန်နု ဖော်ချူ့ကို ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၂ ရက်နေ့က ချင်းမိုင်ခရိုင်တရားရုံးကနေ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။
သူမ သိမ်းယူထားတဲ့အထောက်အထားတွေကတော့ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းထောက်ခံချက် CI စာအုပ်၊ ပန်းရောင်ဘတ်ကတ်နဲ့ ဝေါ့ပါမစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်ရှင်ရဲ့လုပ်ရပ်ဟာ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလွတ်လပ်စွာနေထိုင်သွားလာခွင့်ကိုထိခိုက်စေတဲ့အပြင် လမ်းခရီးတွင်ဖမ်းဆီးခံရခြင်း၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးထံရက် ၉၀ တုံးထုနှ်ိပ်ခြင်းနဲ့ ဆေးကုသမှုခံယူခြင်းတွေကိုပါ အခက်အခဲဖြစ်စေတဲ့အတွက် အလုပ်သမားက ထိုင်းအစိုးရမှဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ တိုင်ကြားချက်လက်ခံရေးစင်တာနဲ့ နိုင်ငံခြားလုပ်သားများပူးပေါင်းဝန်ဆောင်မှုစင်တာတွေကို တိုင်တန်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အလုပ်ရှင်ကမူလအကြောင်းပြချက်ကိုသာ ထောက်ပြငြင်းဆိုတဲ့အတွက် ဖောင်ဒေးရှင်းတစ်ခုမှ တရားဥပဒေဆိုင်ရာကူညီမှုအနေနဲ့ ရဲစခန်းကိုအမှုဖွင့်တိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် တရားရုံးမှ အလုပ်ရှင်ဖြစ်သူ “မစ္စနွန်နု ဖော်ချူ့”အားထောင်ဒဏ် ၁ နှစ်နဲ့တကွ ငွေဒဏ်ဘတ် ၁ သောင်းချမှတ်ခဲ့ပြီး အလုပ်ရှင်သည် ပြစ်မှုကင်းစင်သူဖြစ်ပြီး ယခုပြစ်မှုအပေါ်ဝန်ခံတဲ့အတွက် လျှော့ပေါ့ပြစ်ဒဏ်အဖြစ် ၁ နှစ်ဆိုင်းငံ့ပြစ်ဒဏ် ထောင်ဒဏ် ၁၅ ရက် နဲ့ဒဏ်ငွေဘတ်၅ ထောင်အဖြစ် ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။
အချက်အလက်နဲ့ဓာတ်ပုံများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် : Human Rights and Development
Taggedlabour newsmyanmaMyanmarMyanmar live newsအလုပ်သမားရေးရာသတင်းမြန်မာ
Previous Article ကျနော်ဘယ်သူနဲ့စကားပြောခဲ့တာလဲ ?
Next Article အာရှဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်၏ လူမှုအကျိုးပြု စွမ်းဆောင်ရည်ဆု မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ဆွတ်ခူးရရှိ